२० मिश्रित कुकुर जातहरू - PreeWow - परिवार
२० मिश्रित कुकुर जात र सबै कुरा तपाईको बारेमा जान्नु पर्छ
20 Mixed Dog Breeds
मानवले कुकुर जातका डिजाइनहरू गरिरहेकै छ, जहाँसम्म हामी जानुहुन्छ। हामीले केहि नस्लहरू, कोलीहरू जस्तै मोल्ड गरेका छौं, गर्वपूर्ण, आत्मविश्वास भएका कुकुरहरू जो प्रभावकारी रूपमा भेडा भेडा गर्न सक्छन्। अन्य, चिहुआहुस जस्ता, हामी साथी जनावरहरूको रूपमा जन्मेका छौं जसले आदेशलाई गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक पर्दैन। भर्खरका दशकहरूमा, यद्यपि हामीले स्वास्थ्य वा व्यक्तित्वका सरोकारलाई वशमा पार्न र सकारात्मक गुणहरू हाइलाइट गर्न जानबूझकर प्रयास गरी नस्लहरू संयोजन गर्ने प्रयास गरेका छौं। यो प्रक्रियाको परिणामस्वरूप धेरै मिसिएको कुकुर जातका अनुपम रूप, स्वास्थ्य प्रणाली र विचित्र re यद्यपि रमाईलो –— नामहरू छन्।
(यो उल्लेखनीय छ कि प्रजनकको सफलता दरले फरक पार्दैन, मिश्रित जातका कुकुरहरू अझै पनि रोगको लागि जोखिममा पर्दछ; केवल शुद्ध जातका कुकुरहरू माझको एउटा जीनलाई शान्त गर्नुको मतलब यो रेखामा सतह बन्न सक्दैन।)
मिश्रित जातका एक साँच्चै सुन्दर पक्ष? प्रत्येकले यसको शुद्ध बच्चाको अभिभावक भन्दा फरक देखाउँदछ र कार्य गर्दछ, र यदि तपाईं एक स्वीकार्नुभयो भने तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने कुरा ठ्याक्कै पिन गर्न लगभग असम्भव छ। केहि लक्षणहरू अरूहरू भन्दा बढि अवस्थित हुन्छन्, तर ती सबै जीनहरूमा उफ्रिन्छन् र कुन चीजहरू यसको माध्यमबाट चम्किन्छन्। हेर्नुहोस्: हामी तपाईंलाई हिम्मत गर्दछौं कि यी एक प्रकारको पिल्हरूसँग प्रेम गर्न नपाओस्।
सम्बन्धित: २० शान्त कुकुर जातले सोच्न को लागी शोर एक जाने गरीन्छ भने
MirasWonderland / गेट्टी छविहरू
१. पोम्स्की: पोमेरानियन + हस्की
उचाई: १० - १ inches इन्च
तौल: - - p 38 पाउण्ड
आयु: १ - - १ years बर्ष
व्यक्तित्व: आकार सम्भावनाहरूमा नाटकीय भिन्नता नोट गर्नुहोस्! पोम्स्की पपीहरू (सबै मिश्रित वा डिजाइनर जातहरू जस्तै) उनीहरूको शुद्ध बच्चा जन्मेका आमा जस्तै देखिन्छन् विशेष गरी जब यो आकारको आउँदछ, किनभने पोमेरेनियालीहरू हस्कीहरू भन्दा धेरै सानो हुन्छन्। विगत केहि बर्षमा उच्च माग मा, यी कुकुरहरु शहरवासीहरु संग राम्रो गर्छ। निश्चित, तिनीहरू उच्च उर्जा छन् र उनीहरूको हस्की रेखाबाट केही हठी स्वतन्त्रता प्रदर्शन गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरू प्राय: सजिलै तालिम पाउँछन् र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दछन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: हिप डिस्प्लासिया (सबै हस्की मिश्रणहरूमा), घुडा डिस्लोकेशन र आँखाका व्याधाहरूको लागि हेर्नुहोस्।
गनर द्वारा साझेदारी गरिएको पोष्ट (@ gunner_the_pitsky) सेप्टेम्बर,, २०१ 2019 8::37 बिहान PDT
घुमाउरो कपालको लागि हेयरडोज
२. पिट्सकी: अमेरिकी पिटबुल टेरियर + अलास्कन वा साइबेरियन हस्की
उचाई: २० - २ inches इन्च
तौल: --० - p० पाउन्ड
आयु: १२ - १ years बर्ष
व्यक्तित्व: एउटा भव्य मिश्रण जुन भर्खरै लोकप्रिय भयो, यो कुकुरले पिट्बुलको मित्रता र हस्कीको जिद्दीलाई लिन्छ (अर्थात्, प्रशिक्षण कठिन हुन सक्छ, तर यो रमाईलो हुनेछ)। एक उच्च ऊर्जा पिल्ला को लागी तयार हुनुहोस् जो वास्तवमा ऊ कति ठूलो हो बिर्सिन सक्छ। हकीहरू ठूला चालकहरू हुन्, त्यसैले यदि तपाईको पिट्सकी एकदम भोकल छ भने, तपाईले उसको अलास्कन वा साइबेरियाली जरा पाउनुभयो धन्यवाद। समग्रमा, यो एक चंचल, मायालु र वफादार कुकुर हो।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: हकीहरू हिप डिस्प्लासिया हुने खतरा हुन्छ र दुबै प्रजातिहरू पछि जीवनमा हाइपरथायरायडिजमको रूपमा चिनिन्छन्।
DejaVu डिजाईन / गेट्टी छविहरू
Al. Alusky: अलास्का मालामुट + हस्की
उचाई: २ - - २ inches इन्च
तौल: --० - १०० पाउण्ड
आयु: १० - १ years बर्ष
व्यक्तित्व: ठुलो र बाहिर जाने, Aluskies अनुशासित, अझै सकारात्मक, प्रशिक्षण व्यवस्था आवश्यक छ। तपाईले आफ्नो प्याकको नेताको रूपमा आफैलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ कि हेडस्ट्रstrong्ग स्ट्र्याकलाई सामना गर्न (यद्यपि प्याक मानसिकताका साथ तिनीहरू अविश्वसनीय सामाजिक र वफादार साथीहरू हुन्)। तिनीहरूसँग धेरै टन ऊर्जा छ र नियमित समयको स्पोर्ट्सको समय चाहिन्छ। त्यो जिद्दी हस्की स्ट्र्याकले यी कुकुरहरूलाई नयाँ-नयाँ कुकुर मालिकहरूको लागि कठोर विकल्प बनाउँदछ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: हिप डिसप्लासिया र कान संक्रमण, कान वरिपरि मोटो फर को कारण, Aluskies को लागी स्वास्थ्य जोखिम हो।
Lab. ल्याब्स्की / साइबेरियन रिट्रीइभर: लैब्राडोर रिट्रीइभर + हस्की
तौल: - 35 - p० पाउण्ड
आयु: १० - १२ बर्ष
व्यक्तित्व: बुद्धिमत्ता र आकर्षणको एक उत्तम संयोजन, Labskies महान परिवार कुकुर हो। उनीहरू आफ्ना मानिसहरूलाई माया गर्छन्! तिनीहरू पनि उठ र चीजहरू गर्न मन पराउँछन्, त्यसैले गतिविधि र साहसका लागि पर्याप्त अवसरहरू प्रदान गर्न निश्चित गर्नुहोस्। जहाँ हस्कीहरू सजिलै प्रशिक्षण सत्रको बोर गर्न सक्छन्, प्रयोगशालाहरू खुशी पार्न उत्सुक छन्; आशा छ तपाईको पिल्लाले त्यो ल्याब मानसिकता पाउनेछ, तर यदि होईन भने तपाईको हिलमा खोतल्न तयार हुनुहोस् र आफूलाई अल्फा कुकुरको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ (धेरै प्रेम सहित, अवश्य पनि)। साथै, तपाइँको पूरै घरमा एक लिन्ट रोलर लिनको लागि तैयार हुनुहोस् किनकि यी पिप्सहरू कसैको व्यवसाय जस्तो शेड गर्दैनन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: त्यो खतरनाक हस्की हिप डिसप्लासिया, आँखा सर्तहरू र एलर्जीको साथ यी पिल्लाहरू प्लेग गर्न सक्छन्।
माइक लिन्नन / p००px / गेट्टी छविहरू
Go. गोबेरियन: गोल्डन रिट्रीइभर + साइबेरियन हस्की
उचाई: २२ - २ inches इन्च
तौल: --० - 90 ० पाउन्ड
व्यक्तित्व: ल्याब्स्कीसँग मिल्दोजुल्दो, गोबेरियन एक ठूला, कुद्ने शिशु हो जसले आफ्नो प्याकमा वफादारी प्रदर्शन गर्दछ। सामान्यतया, त्यो प्रसिद्ध मैत्री सुनौलो स्वभाव लिन्छ, र एक स्वतन्त्र लहर यसको टाउको rears भने, यी कुकुर शुद्ध स्नेह को लागी डिफल्ट। तिनीहरू उनीहरूको मान्छेसँग नजिक हुन चाहन्छन् (कहिलेकाँही उनीहरू लाग्दछ उनीहरू कुकुरहरू हुन्) र तपाईंलाई सुरक्षा गर्न डराउँदैनन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: शुद्ध पीडित गोल्डनहरू प्रायः कुनै न कुनै रूपमा वा जीवनमा पछि क्यान्सर विकास गर्दछन्। आशा छ कि यो प्रवृत्ति ह्स्की जीनले मौन गरेको छ।
विन्स्लो प्रोडक्शन्स / गेट्टी छविहरू
C. Cockapoo: Cocker Spaniel + Poodle
उचाई: १२ - १ inches इन्च
तौल: - - p० पाउण्ड (औसत १ 19)
व्यक्तित्व: हाम्रो सूचीमा तपाईंले धेरै टन पोडल संयोजन ब्रीडहरू देख्नुहुनेछ किनभने तिनीहरू अत्यधिक बुद्धिमान, सामाजिक र हाइपोअलर्जेनिक हुन् - तीन विशाल प्लस जब नयाँ नस्ल उत्पादनको कुरा आउँछ। कोकापुस पहिलो पटक १ 60 s० को दशकमा लोकप्रिय बने। एक ऊर्जावान स्वभाव, एक प्रबन्ध योग्य आकार र एक आज्ञाकारी व्यक्तित्व को साथ, यी कुकुरहरूले नयाँ कुकुर मालिक र परिवारहरूको लागि उत्कृष्ट प्लेमेट बनाउँदछन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: शुद्ध पीडल र ककर स्पानियल्सलाई रमाईलो पटेलहरू (मूलतः, लुगा कुना टेपहरू) विकास गर्न परिचित छ। संयुक्त स्वास्थ्य र आँखा संक्रमण बाट सावधान रहनुहोस्।
फिलिप चोरी / गेट्टी छविहरू
Ber. बर्नडुडल: बर्न्नेस माउन्टेन डग + पुडल
उचाई: १ - - २ inches इन्च
तौल: २ - - p ० पाउन्ड (पोडल अभिभावकमा निर्भर गर्दै)
व्यक्तित्व: बर्नडेडल २००० को शुरुमा पहिलो पटक देखा पर्‍यो, संवेदनशील बर्नीस पहाडी कुकुर र धूर्त पोडलको मिठो संयोजन। दुबै नस्लहरू वफादार, कोमल आत्माको हुन्छन्, तर आज्ञा पालन गर्ने प्रशिक्षणको लागि दृढ दृष्टिकोणको आवश्यक हुन्छ यदि कुकुरले बर्न्नेको नर्भस उर्जाको अधिक अधिकार पायो भने। यो एलर्जी भएका व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प हो किनकि शेडिंग कम हुन्छ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: दुबै हिप र कुहिन डिसप्लासिया बर्नेडल्ससँग सम्भावनाहरू हुन्।
बेली बू द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@ bailey_boo_atx) सेप्टेम्बर २, २०१ 2019 साँझ :14:१:14 अपराह्न PDT
Cor. कर्गिपु: कोर्गी + पोडल
उचाई: १० - १२ इन्च
तौल: १२ - p० पाउण्ड
व्यक्तित्व: प्राय: होइन, खेलौना, स्ट्यान्डर्डको सट्टा, पुडलहरू कोर्गिससँग प्रजनन गरिन्छ। यसले सानो कदको स्मार्ट, हंसमुख संयोजनको लागि बनाउँदछ। कुकुरको हठी कोर्गी पक्षलाई ट्रेनको साइटमा भएका सबै कुरालाई नष्ट नगर्न तालिम दिन पोडल लाइनको बुद्धिमत्तालाई सदुपयोग गर्नुहोस्। विस्तारित समयावधिको लागि एक मात्र कोर्गीपो छोड्नु कुनै राम्रो विचार होईन, किनकि यी ऊर्जावान पिल्लाहरू बोर हुन सक्छन् र यसलाई तपाईंको सामानमा लिन सक्दछन्। यो विचार गर्न एक राम्रो कुकुर छ यदि तपाईं पहिले नै घरमा घरपालुवा जनावर पाउनु भएको छ र परिवार विस्तार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ किनकि तिनीहरू मित्रैलो, सामाजिक जीवजी छन् जो कम्पनी मन पराउँछन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: केहि कोर्गिपुहरूले एडिसनको रोग विकास गर्दछ, एक एड्रेनल र हार्मोनल डिसअर्डर। अरूलाई हिप मुद्दाहरूको लागि ज्ञात गरिएको छ।
रेनफोटो / गेट्टी छविहरू
York। यॉर्किपु: यॉर्की + पुडल
उचाई: - - १० इन्च
तौल: - - १ p पाउण्ड
व्यक्तित्व: योर्कशायर टेरियर र पोडलको उर्जाको ऊर्जा जोड्नुहोस्, र तपाईंले आफूलाई आज्ञाकारी, विश्वस्त कुकुरको लागि सेट अप गर्नुभयो जो कार्यमा भाग लिन चाहान्छन् तर ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छैन। यॉर्किपूप्सलाई शारीरिक व्यायाम गरेजस्तै मानसिक व्यायाम पनि आवश्यक पर्दछ। कुनै पनि जीवनशैलीको लागि मात्र अनुकूलनीय, यी पहिलो पटक कुकुर मालिकहरूको लागि उत्तम विकल्प हो।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: कलेजो र सास फेर्ने समस्याहरू योर्कीपूजमा विकसित हुन जान्न सकिन्छ, जसको घुँडाको जोड़ दुख्ने छ।
१०. डबल डूडल: गोल्डन्डुडल + ल्याब्राडल
तौल: --० - p० पाउण्ड
व्यक्तित्व: जब तपाईं गोब्रेन्डुडल (गोल्डन रिट्रीइभर-पूडल मिक्स) लाई लैब्राडल (एक लैब्राडोर रेट्रिभर-पूडल मिक्स) सँग मिसाउनुहुन्छ, तपाईं मिठो, घुमाउरो र मैत्रीको ओभरलोड पाउनुहुन्छ। यी उच्च-ऊर्जा कुकुरहरू परिवारहरू, सामाजिक पुतलीहरू वा पहिले नै घरपालुवा जनावर वा दुईको स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूका लागि भयानक जनावरहरू हुन्। आज्ञाकारिता स्वाभाविक रूपमा आउँदछ र तपाइँ मिश्रणमा दुई वा दुई ट्र्यान्सी टास्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रेम दिनुहोस् र तपाईं बदलामा धेरै प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: घुँडा, कुहिनो र हिप डिस्प्लेसिया डबल डूडलमा असामान्य हुँदैनन्।
किमीले साझा गरेको पोष्ट ?? (@ kimi.the.labradormini) सेप्टेम्बर २, २०१ 2019 बिहान :0:०4 बिहान PDT
११. कोर्गिडोर: कोर्गी + लेब्राडोर रिट्रीइभर
उचाई: १२ - २ inches इन्च
तौल: - 35 - p० पाउन्ड
व्यक्तित्व: लेउड-ब्याक जब तपाईं तल झर्न तयार हुनुहुन्छ, र केहि पनि जब तपाईं साहसिकको लागि तयार हुनुहुन्छ, Corgidors मनपर्दछ र साथ ट्याग गर्नुहोस्। दुबै सतर्क र ध्यान दिएर, यी कुकुरहरूले निश्चित रूपमा आफुलाई परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना मान्छेहरूको अभिभावक ठान्छन्। तिनीहरू धैर्यवान छन् (बच्चाहरूको साथ महान), तर तिनीहरूले पनि धेरै बगाए (एलर्जी पीडितहरूका लागि ठूलो होइन)।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: कमर दर्द र हर्निएटेड डिस्कहरू कोर्गीडोरहरूको बीचमा सामान्य देखिन्छ, साथै हिप डिसप्लासियाको कहिलेकाँही घटनाहरू पनि।
डेबी बेकर (@dancingibis) द्वारा साझा गरिएको पोष्ट अगस्त २ 25, २०१ 2019 बिहान २::5२ बिहान PDT
१२. डिगर: क्याभिलियर किंग चार्ल्स स्पानियल + लैब्राडोर रिट्रिभर
तौल: २२ - p 55 पाउण्ड
व्यक्तित्व: क्याभाडोर भन्दा पनि अधिक मिलनसार संकर नस्ल भेट्टाउन तपाईं कठोर बन्नुहुनेछ। १ 1990 1990 ० को दशकदेखि, यस जातिको यसको कोमल, सुरक्षात्मक आचरणको कारण परिवारहरूमा धेरै लोकप्रिय छ। उनीहरूसँग प्रशंसनीय ऊर्जा छ। (त्यसैले क्याभाडोर बाहिर जानुहुन्छ जब तपाईं सक्नुहुन्छ) र पर्याप्त स्नेह भन्दा बढी वरिपरि जान।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: मेरुदण्डका मुद्दाहरू काभेडरहरूमा पनि देखा पर्छन्; कहिलेकाँही मस्तिष्क र मेरुदण्डका गुहाहरू तरल पदार्थले भरिन्छ र गम्भीर पीडा हुन सक्छ।
छवि स्रोत / गेट्टी छविहरू
१.. पग्गल: बीगल + पग
उचाई: - - १ inches इन्च
तौल: १ - - २। पाउण्ड
व्यक्तित्व: कुनै पनि बीगल हाइब्रिडले सम्भावित बिन्दुमा केही हाउन्ड इन्स्टिन्टहरू प्रदर्शन गर्दछ (सोच्नुहोस्: रुँदै र उनको नाक पछ्याउँदछ जहाँ उनलाई लिन्छ)। यो संकर नस्ल, जुन शुरुमा १ 1980 s० को दशकमा देखा पर्‍यो, यसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू बिना पगको हस्ताक्षर कर्ल्यु टेल र पगको एक्जिबिलिटी प्रदान गर्दछ। पग्गलहरू मीठो र चंचल हुन र सँधै सार्वजनिक स्नेहको प्रदर्शनका लागि जानिन्छ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: केवल किनभने तिनीहरूको नाक शुद्ध ब्रेड पगहरू भन्दा छोटो छैन यसको मतलब श्वासप्रश्वासको समस्याहरू कुनै सम्भावना हुदैनन्। पग्गलहरू पनि जन्मजात हृदय दोष र मेरुदण्डको सूजनबाट ग्रस्त हुन सक्छ।
Lozhoyle / गेट्टी छविहरू
१.. फ्रान्सेली पग / फ्रुग: फ्रेन्च बुलडग + पग
तौल: १ - - २० पाउण्ड
आयु: - - १ years बर्ष
व्यक्तित्व: फ्रुग नाम क्यानाइन भन्दा बढी उभयचर देखिन्छ, तर यी feisty जीवहरू 100 प्रतिशत कुकुर छन्। हाम्रो सूचीमा एक पुरानो संयोजन मध्ये एक, यो जात १०० बर्ष भन्दा पुरानो हो र ध्यानको माग गर्न आउँदा बिल्कुल बिग्रियो भनिन्छ। यी ठूला व्यक्तित्वहरूलाई प्रशिक्षणको क्रममा धेरै समर्पण आवश्यक पर्दछ, किनकि उनीहरू आफैंको शर्तमा जीवन बाँच्न चाहन्छन् यद्यपि उनीहरू तपाईंलाई खुसी बनाउँन चाहन्छन्। दुबै पग र फ्रेन्च बुलडगमा श्वासप्रश्वासको समस्या छ र महान पोखरीहरू होइनन्, त्यसैले उनीहरूलाई ओभररेक्सट गर्नु हुँदैन वा पानीको वरिपरि छोड्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: उस्तै सास फेर्न गाह्रो समस्याहरू फ्रिब्समा सम्भव भएको फ्रिब्ड पग र फ्रान्सेली बुलडग अनुभव सम्भव छ, जस्तो कि यी प्रजातिहरूका मुख्य समस्याहरू।
जर्ज बेली द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@ its.a.wonderful.pupLive) सेप्टेम्बर २, २०१ 2019 मा १:२ at अपराह्न PDT
१.. Aussiepom: अस्ट्रेलियाई शेफर्ड + Pomeranian
तौल: १० - p० पाउण्ड
व्यक्तित्व: चेतावनीको शब्द: लामो समय अवधिको लागि तपाईंको Aussiepom घर एक्लै छोड्ने आशा नगर्नुहोस्। तिनीहरू केवल मानव साथीहरूलाई मात्र प्रेम गर्दैनन्; उनीहरूसँग प्रशस्त ऊर्जा छ र तिनीहरू सामेल हुन चाहन्छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई धेरै बेवास्ता गर्नुभयो भने, तिनीहरू विनाशकारी हुन सक्छ। यी कुकुरहरूको गोठाला पक्ष घुमाउन वा अपरिचितहरूलाई यसका मालिकहरूलाई सचेत गराउन उत्सुक छ। सबै भन्दा माथि, तिनीहरू मित्रवत cuddlers हुन जो धेरै स्नेह प्रदर्शन।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: जबकि समग्रमा स्वस्थ, Aussiepoms घुँडा र संयुक्त रोग विकास गर्न सक्छ र अक्सर आफ्नो पुरानो बर्ष मा कमजोर आँखा र सुन्न अनुभव गर्न सक्छन्।
भेनेसा म्याकउली / गेट्टी छविहरू
१i. चिहुनी: चिहुआहुआ + डाचसुन्ड
उचाई: - - १२ इन्च
तौल: - - १० पाउण्ड
व्यक्तित्व: दुई साना नस्लहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई कफनेस ओभरलोडका लागि सँगै राख्नुहोस्! चिउनी एक बहुमुखी प्राणी हो जसले एकल-अभिभावक अपार्टमेन्टहरू वा ठूला पारिवारिक मिश्रणहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ। यी बहादुर साना कुकुरहरू हुन् जसले दृढ वफादारी र विचित्र साथीहरूको सेवा गर्छन्। सम्भावित खतराहरूको लागि चेतावनी बार्क गर्न डराउँदैनन्, तिनीहरू प्रशिक्षणको बेला हठी हुन सक्छन् किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूलाई राम्ररी थाँहा छ। त्यसोभए धैर्यता राख्नुहोस् र काडल्समा ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईं निराश हुनुभयो भने।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: गरीब चिहुआहुआस प्राय जसो एलर्जीबाट ग्रस्त हुन्छन्, जो कि चिउनी पिल्लूहरूमा घुसेको हुन्छ।
विलो द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@ willow_the_bojack) सेप्टेम्बर २, २०१7साँझ :4::4 PD PDT
१.. BoJack: बोस्टन टेरियर + ज्याक रसल टेरियर
उचाई: १ to देखि १ inches इन्च
तौल: १० देखि २० पाउन्ड
जीवन: १२ देखि १ years वर्ष
व्यक्तित्व: जिज्ञासाले बिरालालाई मारेको हुन सक्छ, तर यसले यस जीवन्त क्यानाइनलाई दिनभरै निरन्तरता दिइरहेको छ - र त्यसपछि केहि। लगातार केहि गर्न को लागी वा कसैसँग खेल्न को लागी, BoJacks लाई स्टीम छोड्नको लागि धेरै व्यायामको आवश्यक पर्दछ। तिनीहरूको उत्तममा, यी कुकुरहरू खेलकूद स्प्राइटहरू हुन्; उनीहरूको नराम्रो स्थितिमा, तिनीहरू थोरै आक्रामक, खाँचोमा परेका हुन सक्छन्।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: संयुक्त समस्याहरू - विशेष गरी जब यो घुँडा र कुकुटको लागि आउँछ र लजालु; - प्लेग BoJacks प्लेग। तिनीहरू उमेर ढल्कँदै बहिरा हुन सक्छ।
पिराट वेस्ली / फ्लिकर
१.. सीमा शिपडग: सीमा कोल्ली + शेटल्याण्ड शिपडग
उचाई: १ - - २२ ईन्च
तौल: २ - - p२ पाउन्ड
व्यक्तित्व: सीमाना भेडडगहरू गर्न काम गर्न मन पराउँछन्! निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले धेरै व्यायाम पाउँदछन् (यार्ड यी पिल्लाहरूको लागि उत्तम हो) र मानसिक गतिविधि। कहिलेकाँही, तिनीहरू आफैंलाई बहादुर रक्षक कुकुरहरू भनेर लिन्छन्, जुन महान छ, तर अपरिचितहरूमा अत्यधिक भौंकने र अलग्गिने चिन्ताको लक्षण देखा पर्न सक्छ यदि एक्लै लामो समयसम्म छोडियो भने। सँगै धेरै गुणस्तरीय समयको लागि तयार हुनुहोस्, विशेष गरी प्रारम्भिक वर्षहरूमा जब प्रशिक्षण र समाजीकरण महत्वपूर्ण छ। यो होइन कि तपाईंले यी मध्ये एउटामा कुचोल्ने सम्बन्धमा गुनासो गर्नुभयो।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: सीमाना भेडडगहरूले हृदय भल्भ दोषहरू र एक अवस्थाले असर गर्न सक्दछ जुन असक्षम रगतको थक्काको कारण हुन्छ।
रोबी गुडल / गेट्टी छविहरू
१।। बीगियर: बीगल + क्याभिलियर किंग चार्ल्स स्पानियल
तौल: १० - २। पाउण्ड
व्यक्तित्व: मूल रूपमा १ 1990 1990 ० को अस्ट्रेलियामा पैदा भएको बीग्लियर्ससँग सजीलो स्पानियल व्यक्तित्व र मायालु बीगल प्रवृत्ति हुन्छ। ऊर्जावान हुँदा, तिनीहरू यति स्वतन्त्र हुँदैनन् कि प्रशिक्षण कठिन छ। वास्तवमा तिनीहरू आफ्ना मालिकहरूलाई खुशी पार्न मन पराउँछन् र चाँडै आज्ञाकारिता संकेतहरू लिन्छन्। तिनीहरू एक्लो समय (बिगलको विशेषता) लाई बढी संवेदनशील हुन सक्छन तर निश्चय पनि शान्त समयको लागि तल छन् (काभिलियर किंग चार्ल्स लक्षण) जब सम्म तपाईं वरपर हुनुहुन्छ।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: हिप र कुहिनो डिसप्लासियाले बीग्लियर्सलाई असर गर्न सक्छ, जस्तै एपिप्लेसी र कमजोर आँखाहरू (विशेष गरी पुराना कुकुरहरूमा)।
टिन्करबेल द डोग द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@tinkerbellethedog) जुलाई १,, २०१ 2019 १२::35। PDT
२०. प्यापिटेस: प्यापिलन + माल्टिज
व्यक्तित्व: दुई प्यारा, मित्रैलो खेलौना प्रजातिहरू सँगै धुनुहोस् र पक्कै पनि तपाईं एक मानिस-मायालु, आज्ञाकारी सानो क्यानाइन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हो, Papitese कुकुरहरु को लागी प्रेम, तर मात्र एक थोरै आफैलाई थकाउन वरिपरि दगुर्दा पछि। सकारात्मक प्रशिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस् र उनीहरूको सम्वेदनशील स्वभावहरूको बारेमा सचेत रहनुहोस्; सामान्यीकरण र बिच्छेदन चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ यदि उनीहरूलाई लाग्छ कि तपाई अत्यन्त कठोर हुनुहुन्छ वा धेरै लामो एक्लै छोड्नुभयो भने।
सम्भावित स्वास्थ्य मुद्दाहरू: उच्च रक्तचाप र मुटु मुद्दाहरू Papitese कुकुरहरु मा popped।
सम्बन्धित : ११ ठूलो कुकुर ऊर्जाको साथ सानो कुकुर जात
प्लस आर्थोपेडिक पिलोवोप कुकुर ओछ्यान
वन्य वन पोप ब्याग क्यारियर
$ १२ अहिले खरिद गर
जंगली एक एयर यात्रा कुकुर वाहक
$ १२। अहिले खरिद गर
KONG क्लासिक कुकुर खिलौना
$ 8 अहिले खरिद गर
अंग्रेजी भाषा रोम-कॉम फिल्महरूको सूची
केरा प्रोटीन छ?
घरमा छाला कपाल हटाउने
अपराध मा सबै भन्दा राम्रो चलचित्रहरू
अंडाकार अनुहार केटी को लागी कपाल
महिला को लागी लोकप्रिय कपाल काट्ने